HomeLoveတဈသကျလုံး FA ဖွဈမယျ့လူ (၁၁) ယောကျ
Gall up ကုမ်ပဏီရဲ့ စဈတမျးတှအေရ လူ 100 မှာ 60% က အထီးကနျြနကွေပါတယျ။ အှနျလိုငျးအောငျသှယျတျော ဝကျဘျဆိုကျတှေ ရှိရဲ့သားနဲ့၊ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူတှေ သနျးပေါငျးရာနဲ့ခြီပွီး သုံးနတေဲ့ Tinder App ရှိရဲ့သားနဲ့ FA တှကေ ရှိနပေါသေးတယျ။
1. မမေခေဈြတဲ့ သားလေး
သငျဟာ ညစာစားပွီးလို့ ကျောဖီသောကျဖို့အတှကျ သငျ့ကောငျလေးက အိမျအလညျချေါတယျ ဆိုပါစို့။ ဒါပမေယျ့ ဘေးအခနျးမှာ သူ့မိဘတှအေိပျနလေို့ တိတျတိတျဆိတျဆိတျ နပေေးဖို့ သငျ့ကို တောငျးဆိုတယျပေါ့။ သငျရှေးခယျြတဲ့သူ မိဘတှနေဲ့ပဲ တဈသကျလုံး နခေငျြသူပါ။ မိဘတှရေဲ့အကွိုကျကို လိုကျလုပျပေးပွီး ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြ မရှိရငျတော့ ဒီလိုလူမြိုးက သူငယျခငျြးကောငျးဖွဈပဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခငျပှနျးကောငျးတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
2. Fan အကွီးစား
"မငျးမိဘတှနေဲ့ တှဖေို့ မလာနိုငျတော့ဘူး။ ဒီနေ့ ငါ့အသငျးကို အားပေးရဦးမှာ" ဒီလိုစကားမြိုးကွားရရငျ သငျ့ခဈြသူက သူ့ဝါသနာအတှကျ အရာရာကို စှနျ့လှတျမယျ့သူပါ။ သူ့သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ကိုအမွဲစောငျ့နကွေပါတယျ။ သူရဲ့အိမျမှာလညျး ဘောလုံးတှေ၊ ဆုဖလားတှေ၊ ငါးမြှားတံတှေ၊ အမဲလိုကျပစ်စညျးတှနေဲ့ ပွညျ့နတောပါ။ သူ့အိမျမှာ သငျ့အတှကျ နရောတောငျ ရှိပါ့မလား။
ပုံသှငျးတတျသူက သူ့ရဲ့ခဈြသူကို အနကျရောငျကငျးဗကျစလို့ပဲ မွငျပွီး သူ့ဘဝနဲ့ ကိုကျညီအောငျ ပုံသှငျးမှာပါ။ သငျဟာ အမွဲတမျး အခွားသူမြားနဲ့ နှိုငျးယှဉျခံရပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ ဂငျြးတှမေဝတျဖို့၊ နားကပျဝတျဖို့၊ ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့ သငျ့ကို အမွဲပွောနမှောပါ။ ဒီလို ပုံသှငျးနတေဲ့သူနဲ့တှပွေီ့ဆိုရငျ ရပျလိုကျတာကောငျးပါတယျ။ ပုံသှငျးတတျသူတှရေဲ့ စိတျဝငျစားစရာ အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ သူတို့မှာ မပွညျ့စုံတဲ့ အခကျြတှေ ရှိနပေမေယျ့ သူတို့ကိုယျသူတို့ အဆငျပွတေယျလို့ ထငျနတောပါပဲ။
ဟာသပွောတတျသူကတော့ ညနခေငျးတှတေဲ့ အခြိနျလေးမှာပဲ သူ့ရဲ့စိတျဝငျစားစရာ ဇာတျလမျးတှေ၊ ရယျစရာ အဖွဈအပကျြတှကေို ပွောပွဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနသေူပါ။ အခွားသူတှပွေောတာကို နားထောငျပေးဖို့ စိတျမဝငျစားပါဘူး။ သူစကားကွောရှညျနလေို့ သငျက တခွားအကွောငျး ပွောမယျလုပျရငျ " တဈခါကလေ..... " ဆိုပွီး ဖွတျပွောပါလိမျ့မယျ။ သူနဲ့ထပျတှမေ့ယျ့အစား ရှိုးပှဲသှားကွညျ့တာ ပိုကောငျးပါတယျ။
5. Single မဟုတျသူ
" ကြှနျတေျာ့မှာ ရညျးစားရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ လမျးခှဲဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ " လို့ သငျနဲ့ တှဖေို့ခြိနျးထားတဲ့သူက ပွောပါလိမျ့မယျ။ သငျနဲ့စကားပွောနတေဲ့ တဈခြိနျလုံး သူ့ရညျးစားဟောငျးရဲ့ ကောငျးကွောငျး၊ ဆိုးကွောငျးတှကေိုပဲ ပွောနမှောပါ။ အဓိပ်ပါယျကတော့ သူ့ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ခံစားခကျြတှကေ မအေးစကျသှားသေးဘဲ ရညျးစားအသဈထားဖို့ စိတျကူးမရှိလို့ပါ။
သူကတော့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို အကောငျးဆုံး စားသောကျဆိုငျကို ချေါသှားပွီး ကြောကျပုစှနျတှေ၊ ငါးဥဆားနယျတှနေဲ့ ဒကာခံပါလိမျ့မယျ။ နောကျတဈခါကရြငျတော့ အဲဒီမိနျးကလေးဆီက ပိုကျဆံ ခြေးတော့မှာပါ။ အသုံးအဖွုနျးကွီးတဲ့ မိနျးကလေးကတြော့ ငှခြေေးပွီးတော့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ အဖပေို့ကျဆံတှကေို ထုတျပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ အင်ျကြီအသဈတှေ၊ နောကျဆုံးပျေါ iPhone ဝယျပါလိမျ့မယျ။ ဒီလို အသုံးအဖွုနျးကွီးတဲ့သူကိုလညျး မရှေးသငျ့ပါဘူး။
အမဲသားအေးနတောတှေ၊ နှားနို့ရကျလှနျနတောတှေ၊ ဟိုတယျအခနျးထဲမှာ ဖုနျတဈမှုနျတှတေ့ာတှေ စတဲ့ ဘယျအရာကိုမဆို စောဒကတကျခငျြသူပါ။ အပွဈရှာတတျသူက မပွညျ့စုံတဲ့အရာတှကေို အပွဈလိုကျရှာရတာ ပြျောနသေူပါ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ထူးခြှနျတဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို ပွခှငျ့ရနလေို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ သူရဲ့ခဈြသူကတော့ သူ့ကို လေးစားမှာ မဟုတျပါဘူး။
သငျဟာ ကလေးဘဝတုနျးက မှေးထားတဲ့ခှေးလေး ပြောကျသှားတဲ့အကွောငျး ပွောနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့ခဈြသူက ဖုနျးကိုပဲ ကွညျ့နတေယျဆိုပါစို့။ သငျ့ခဈြသူက ဖုနျးနားက ဘယျတော့မှ ခှာမှာမဟုတျပါဘူး။ သငျဟာ ထမငျးစားရငျး ရုပျရှငျကွညျ့နရေငျတောငျ သူက message ပို့တာ၊ comment ရေးတာ မပကျြပါဘူး။ သငျ့ခဈြသူက social media ကမ်ဘာထဲမှာ နထေိုငျသူပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သူ့အတှကျ အခဈြကို social media မှာ ရှာတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
သူကတော့ ဖုနျးအစုတျလေးရှိနရေငျတောငျ နောကျထပျ smartphone တဈလုံး ထပျဝယျမှာ မဟုတျပါဘူး။ သူဟာ အင်ျကြီအဟောငျးတှကေို ဝတျလို့ရသမြှ ဝတျပွီး ပိုကျဆံတေ စုနသေူပါ။ အင်ျကြီအသဈတှဝေယျဖို့ ပိုကျဆံရှိပမေယျ့ မဝယျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူကတော့ သူနဲ့အမွငျမတူနိုငျတော့ပါဘူး။
သူက တကယျ့ကို လကျထပျခငျြနသေူပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သူနဲ့လကျထပျဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ သူတှကေ လနျ့ပွီး ပွေးကုနျတာပါ။ ကောငျလေးတဈယောကျက ကောငျမလေးတဈယောကျကို ပထမဆုံးတှတေဲ့ရကျမှာ ကလေးဘယျနှယောကျယူမလဲလို့ မေးတယျဆိုပါစို့။ သူ့ရညျရှယျခကျြတှကေ ရှရေ့ောကျလှနျးနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုမေးတာ မသငျ့တျောပါဘူး။ မိနျးကလေးဆိုတာ ရညျးစားအသဈကို သုံးခါလောကျတှပွေီ့းမှ မိဘတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြတာပါ။
သူက အတှေးတဈခုနောကျကို အသညျးအသနျလိုကျပွီး ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေိုလညျး သူ့လိုရှုမွငျစခေငျြသူပါ။ သူ့ရဲ့အတှေးအချေါတှကေို သူ့ခဈြသူသိအောငျ ပွောပွဖို့ဆိုတာ သူ့အတှကျ အသကျတမြှ အရေးကွီးပါတယျ။ သူ့အတှေးအချေါတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဟာသတှေ သှားမပွောမိပါစနေဲ့။ ဒီလိုအတှေးလှနျတဲ့သူနဲ့ ပတျသကျမိရငျတော့ သငျ့မှာရှေးခယျြစရာနှဈခု ရှိပါတယျ။ သူ့ခဈြသူလိုပဲ အတှေးတှနေောကျကို အသညျးအသနျ လိုကျမလား။ သူနဲ့အဆငျမပွလေောကျဘူးလို့ပဲ ဖှငျ့ပွောမလား။
အခုဖျောပွထားတဲ့လူတှထေဲက တဈယောကျယောကျကိုတော့ သငျတှဖေူ့းပွီး ဖွဈမှာပါနျော။
တစ်သက်လုံး FA ဖြစ်မယ့်လူ (၁၁) ယောက်
Gall up ကုမ္ပဏီရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ လူ 100 မှာ 60% က အထီးကျန်နေကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းအောင်သွယ်တော် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရှိရဲ့သားနဲ့၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ သန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး သုံးနေတဲ့ Tinder App ရှိရဲ့သားနဲ့ FA တွေက ရှိနေပါသေးတယ်။
1. မေမေချစ်တဲ့ သားလေး
သင်ဟာ ညစာစားပြီးလို့ ကော်ဖီသောက်ဖို့အတွက် သင့်ကောင်လေးက အိမ်အလည်ခေါ်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် ဘေးအခန်းမှာ သူ့မိဘတွေအိပ်နေလို့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေပေးဖို့ သင့်ကို တောင်းဆိုတယ်ပေါ့။ သင်ရွေးချယ်တဲ့သူ မိဘတွေနဲ့ပဲ တစ်သက်လုံး နေချင်သူပါ။ မိဘတွေရဲ့အကြိုက်ကို လိုက်လုပ်ပေးပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိရင်တော့ ဒီလိုလူမျိုးက သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းကောင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
2. Fan အကြီးစား
"မင်းမိဘတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ မလာနိုင်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ ငါ့အသင်းကို အားပေးရဦးမှာ" ဒီလိုစကားမျိုးကြားရရင် သင့်ချစ်သူက သူ့ဝါသနာအတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်မယ့်သူပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကိုအမြဲစောင့်နေကြပါတယ်။ သူရဲ့အိမ်မှာလည်း ဘောလုံးတွေ၊ ဆုဖလားတွေ၊ ငါးမျှားတံတွေ၊ အမဲလိုက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ။ သူ့အိမ်မှာ သင့်အတွက် နေရာတောင် ရှိပါ့မလား။
ပုံသွင်းတတ်သူက သူ့ရဲ့ချစ်သူကို အနက်ရောင်ကင်းဗက်စလို့ပဲ မြင်ပြီး သူ့ဘဝနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပုံသွင်းမှာပါ။ သင်ဟာ အမြဲတမ်း အခြားသူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဂျင်းတွေမဝတ်ဖို့၊ နားကပ်ဝတ်ဖို့၊ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ သင့်ကို အမြဲပြောနေမှာပါ။ ဒီလို ပုံသွင်းနေတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင် ရပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ ပုံသွင်းတတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ သူတို့မှာ မပြည့်စုံတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်နေတာပါပဲ။
ဟာသပြောတတ်သူကတော့ ညနေခင်းတွေ့တဲ့ အချိန်လေးမှာပဲ သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူပါ။ အခြားသူတွေပြောတာကို နားထောင်ပေးဖို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ သူစကားကြောရှည်နေလို့ သင်က တခြားအကြောင်း ပြောမယ်လုပ်ရင် " တစ်ခါကလေ..... " ဆိုပြီး ဖြတ်ပြောပါလိမ့်မယ်။ သူနဲ့ထပ်တွေ့မယ့်အစား ရှိုးပွဲသွားကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
5. Single မဟုတ်သူ
" ကျွန်တော့်မှာ ရည်းစားရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် " လို့ သင်နဲ့ တွေ့ဖို့ချိန်းထားတဲ့သူက ပြောပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ တစ်ချိန်လုံး သူ့ရည်းစားဟောင်းရဲ့ ကောင်းကြောင်း၊ ဆိုးကြောင်းတွေကိုပဲ ပြောနေမှာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေက မအေးစက်သွားသေးဘဲ ရည်းစားအသစ်ထားဖို့ စိတ်ကူးမရှိလို့ပါ။
သူကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံး စားသောက်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားပြီး ကျောက်ပုစွန်တွေ၊ ငါးဥဆားနယ်တွေနဲ့ ဒကာခံပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခါကျရင်တော့ အဲဒီမိန်းကလေးဆီက ပိုက်ဆံ ချေးတော့မှာပါ။ အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးကျတော့ ငွေချေးပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဖေ့ပိုက်ဆံတွေကို ထုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ကျီအသစ်တွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့သူကိုလည်း မရွေးသင့်ပါဘူး။
အမဲသားအေးနေတာတွေ၊ နွားနို့ရက်လွန်နေတာတွေ၊ ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ဖုန်တစ်မှုန်တွေ့တာတွေ စတဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို စောဒကတက်ချင်သူပါ။ အပြစ်ရှာတတ်သူက မပြည့်စုံတဲ့အရာတွေကို အပြစ်လိုက်ရှာရတာ ပျော်နေသူပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပြခွင့်ရနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ချစ်သူကတော့ သူ့ကို လေးစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ဟာ ကလေးဘဝတုန်းက မွေးထားတဲ့ခွေးလေး ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ချစ်သူက ဖုန်းကိုပဲ ကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ချစ်သူက ဖုန်းနားက ဘယ်တော့မှ ခွာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ ထမင်းစားရင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်တောင် သူက message ပို့တာ၊ comment ရေးတာ မပျက်ပါဘူး။ သင့်ချစ်သူက social media ကမ္ဘာထဲမှာ နေထိုင်သူပါ။ အဲဒါကြောင့် သူ့အတွက် အချစ်ကို social media မှာ ရှာတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
သူကတော့ ဖုန်းအစုတ်လေးရှိနေရင်တောင် နောက်ထပ် smartphone တစ်လုံး ထပ်ဝယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ အင်္ကျီအဟောင်းတွေကို ဝတ်လို့ရသမျှ ဝတ်ပြီး ပိုက်ဆံတေ စုနေသူပါ။ အင်္ကျီအသစ်တွေဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံရှိပေမယ့် မဝယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ချစ်သူကတော့ သူနဲ့အမြင်မတူနိုင်တော့ပါဘူး။
သူက တကယ့်ကို လက်ထပ်ချင်နေသူပါ။ အဲဒါကြောင့် သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ သူတွေက လန့်ပြီး ပြေးကုန်တာပါ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ရက်မှာ ကလေးဘယ်နှယောက်ယူမလဲလို့ မေးတယ်ဆိုပါစို့။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေက ရှေ့ရောက်လွန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမေးတာ မသင့်တော်ပါဘူး။ မိန်းကလေးဆိုတာ ရည်းစားအသစ်ကို သုံးခါလောက်တွေ့ပြီးမှ မိဘတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါ။
သူက အတွေးတစ်ခုနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလည်း သူ့လိုရှုမြင်စေချင်သူပါ။ သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို သူ့ချစ်သူသိအောင် ပြောပြဖို့ဆိုတာ သူ့အတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးပါတယ်။ သူ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟာသတွေ သွားမပြောမိပါစေနဲ့။ ဒီလိုအတွေးလွန်တဲ့သူနဲ့ ပတ်သက်မိရင်တော့ သင့်မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူ့ချစ်သူလိုပဲ အတွေးတွေနောက်ကို အသည်းအသန် လိုက်မလား။ သူနဲ့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ပဲ ဖွင့်ပြောမလား။
အခုဖော်ပြထားတဲ့လူတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကိုတော့ သင်တွေ့ဖူးပြီး ဖြစ်မှာပါနော်။